म्याद सकिएका अमृत ब्राण्डका १४० कार्टुन तेल साबुन कम्पनीमा पठाउन निर्देशन [..] - २०७७-०६-०७
वि.सं. २०७७ आश्विन ०७ बुधवार
चन्द्रमणि भट्टराई | २०७५-०६-२५ | ८८५४ २४
सबै सँगै हिँडे मात्र समृद्धिमा पुगिन्छ — मेयर शाक्य
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक बर्षमा २५.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाउँदै महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले, ९८ हजार ८३४ बर्गमिटर सडक टालेर मर्मत गरिएको, ६० करोड रुपैयाँ बराबरका २१७ वटा चालु र ७ करोड रुपैयाँ बराबरका ४८ वटा नयाँ योजना सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । विहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग भेट गर्ने क्रममा आ. व. २०७४/०७५ को प्रगति विवरण सुनाउँदै उहाँले यो तथ्य सुनाउनुभएको हो ।
महानगरले गरेका केही काममा आलोचना पनि भएका छन् । ती विषय आफैंमा विवादित नभइ, बिषय हेर्ने मनोवृत्ति विवादमा भएको मेयर शाक्यको तर्क छ । काष्ठमण्डप पुननिर्माणका लागि आवश्यक सबै खर्च महानगरले व्यहोर्छ । हामी कोही दाताबाट यसमा लाग्ने खर्च लिँदैनौं । यो बर्ष काष्ठमण्डप पुननिर्माणका लागि हामीले ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । महानगरले काष्ठमण्डप (सत्तल) निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ दियो भन्ने कुरा सत्य होइन । हामीले दिएको ५० लाख प्रारम्भिक रकम (सिड मनी) हो । रानीपोखरी पुननिर्माणको काम हामी आउनु अघिको योजना हो । मेयर शाक्यले सार्वजनिक चर्चाका विषय उल्लेख गर्दै भन्नुभयो — महानगरको केन्द्रीय कार्यालय बनाउने विषय छ, त्यसमा हामीले बाघदरबार मास्न खोेजेका होइनौं । अहिले सबैले देखेको भवन हरिभवन हो । अहिले भवन निर्माणा हुनु अघि नै बाघदरबार नासिइसकेको थियो । यो व्यक्तिबाट सरकारले किनेको भवन हो ।
महानगरले सम्पादन गरिरहेका काम, नागरिक सरोकार विषय र आफ्ना आगामी योजना बताउँदै उहाँले भौतिक पूर्वाधार विकास, समावेशी र पहुँचयुक्त सहर निर्माण, मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सुरक्षा र व्यवस्था तथा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सन्तुलित विकासबाट आफ्नै कार्यकालमा संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानीलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रयासमा आफू क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासका क्रममा धेरै चुनौती छन् । २०४७ सालबाट शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणाली विकास हुँदैछ । यसका कारण उत्पन्न वातावरणीय समस्याबाट महानगर आलोचित छ । तर यसमा महानगरको केही दोष छैन । हामी नेतृत्व लिएर समन्वयात्मक काम गर्ने प्रयासमा छौं, यो प्रयासका बाबजुत पनि अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त हुन सकेको छैन । मेयर शाक्यले सडकको खाल्टाखुल्टीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै — बर्खामा गरेको काम पानीमा बगेर जान्छ भनेर त्यसबेला काम रोकेका हौं । यो बर्षलाई पूर्वाधार विकास बर्षका रुपमा अगाडि बढाएर, अहिले भौतिक समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटोमा हिँडिरहेका छौं ।
कुराकानीका क्रममा मेयर शाक्यले — कर प्रणालीलाई दरिलो बनाउन दरभन्दा दायरामा ध्यान दिएको बताउनुभएको थियो ।
कपुरधारामा शिव मन्दिरको उद्घाटन Previous Post
कुमारी घरको भूकम्पीय संवेदनशीलता प्राविधिक परीक्षण शुरु Next Post
Last Updated on 23rd September 2020, Wednesday 04:36:09 pm